Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာအရေးသည် ဘာသာရေးမဟုတ်
ပြည်ပက ခိုးဝင်ပြီး ကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာ ခြေလာရှုပ်မယ့် တိုင်းတပါးသားတွေကို ကန့်ကွက်နေရင်းမှာပဲ ဒီကိစ္စဟာ ဘာသာရေးမဟုတ်ကြောင်းလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလုပ်ထားဖို့ လိုမယ် ထင်မိပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ (လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သမုတ်နေသူ) တွေဟာ ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့လူမျိုး မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆန့်ကျင်နေခြင်းပါ။ သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို ဆန့်ကျင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းဟာ ဘယ်ဘာသာကို မဆို လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့် မယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဘာသာမတူလို့ ဆိုပြီး သွေးကွဲနေရင်တော့ ဒါမရင့်ကျက်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အခုပြဿနာဖြစ်နေတာက ယုံကြည်မှုမဟုတ်ပါ။ မြေကိစ္စ၊ လူဦးရေကိစ္စ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုကို တစ်စစမျိုလာမယ့် ကိစ္စသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေလည်း သဘောထားကြီးကြဖို့ ပန်ကြားချင်ပါတယ်။ အားလုံး ၀ါးလုံးရှည်နဲ့တော့ သိမ်းကျုံးမလုပ်ကြပါနဲ့။ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုကြပါ။ ဒါကိုက ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ပန်ကြားချင်တာကတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ဘာသာတူသူတွေကိုပါ။ သူတို့နဲ့ ဘာသာတူ တိုင်း သူတို့ဘက်ကနေရမယ်မဟုတ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး မြန်မာပါ။ မြန်မာဘက် ကပဲ နေကြပါ။ စကားပမာ ဥပမာတစ်ခုပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ပတ်လည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တော်တော်ရှိပါတယ်။ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘာသာတူသူတွေပေါ့။ အဲဒီလို ဘာသာတူတဲ့ လူမျိုးခြားတွေက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေပေါ် စော်ကားလာမယ် ဆိုရင်ရော ကျွန်တော်တို့က ငုံ့ခံနေမယ် ထင်သလား။ နယ်စပ်နေတိုင်းရင်းသားတွေမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘာသာခြားတာတွေအများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးဟာ မြန်မာတွေပဲ၊ တစ်နိုင်ငံတည်းသားချင်းပဲ။ ဒီလိုပဲ ခံယူထားကြပါတယ်။ သူတို့ကို တခြားနိုင်ငံသားတွေက စော်ကားလာရင် (စော်ကားသူတွေက ဘာသာတူသလား ဘာလား) အရေးစိုက်နေလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ထပ်ပြောပါဦးမယ်။
ကျွန်တော်ပြောနေတာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသားရေးသာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲရောက်လာ ကုလားအုပ်နှာခေါင်းဝင်သလိုနည်းနဲ့ နယ်ချဲ့နေသူတွေကို ဆန့်ကျင်လိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ဘာသာဝင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး လေးစားနေရတာ၊ တန်ဖိုးထားနေရတာ အများကြီးပါပဲ။ အမြင်သာဆုံးတစ်ခုကိုပြောရရင် အာဇာနည်ကုန်း ရောက်တိုင်း ဆရာကြီး ဦးရာဇာတ်ကို ကျွန်တော်တို့ အလေးမပြုပဲ မနေကြပါ။ ဆရာကြီး ဦးရာဇာတ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါ။ ဒါကို လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ အာဇာနည် တစ်ယောက်ပါ။ ဂုဏ်ပြုမဆုံး လေးစားမဆုံးဖြစ်နေရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုပဲ မြင်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ အားလုံးဟာ ငါမြန်မာ၊ မြန်မာပြည်ကို ထိလာလို့တော့ ဘယ်သူမှ ငုံ့မခံဘူး။ ဘယ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ် တွယ်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ထားကြဖို့ပါပဲ။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 3:38 PM
We have the right to protect our country!!! No fear! Time to drive the dogs away... Brothers and sisters, Let's join....
Now is time to beat dogs. Lets joins all brothers and sister.
"ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာလဲ" (အဏ္ဏ၀ါစစ်သည်)